कपिल शर्माको शोमा पुनः नवजोत सिंह सिद्धूको ‘इन्ट्रि’ ? यो कुराले दिइरहेको छ ‘हिन्ट’ | Ratopati
कपिल शर्माको शोमा पुनः नवजोत सिंह सिद्धूको ‘इन्ट्रि’ ? यो कुराले दिइरहेको छ ‘हिन्ट’
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक २७, २०७७ chat_bubble_outline0
भारतका हास्यकलाकार कपिल शर्माको टिभी शो द कपिल शर्मा शोमा एकपटक पुनः परिवर्तन देख्न सकिनेछ । उक्त कार्यक्रममा नवजोत सिंह सिद्धू फिर्ता हुने अनुमान भारतका थुप्रै मिडियाले गरेका छन् । बुधबार कपिल र नवजोत सिंह सिद्धूको भेटघाट भएको थियो । यसका केही तस्बिर सोसल मिडियामा चर्चाको विषय बनेको छ ।
वास्तवमा, बुधबार कपिलले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा केही तस्बिर सेयर गरेका छन् जसमा उनी नवजोत सिंह सिद्धूको घरमा खाना खाइरहेको देखिएका छन् । दैनिक भास्करमा प्रकाशित एक खबर अनुसार नवजोत सिंह सिद्धूको कार्यक्रममा पुनः फिर्ती हुनसक्छ ।
स्रोतका अनुसार नवजोत सिंह सिद्धूलाई शोमा फिर्ता ल्याउनका लागि कपिल बुधबार अमृतसरस्थित उनको घरमा भेट्न गएका थिए जहाँ दुबैले यो मुद्दामा कुराकानी पनि गरे ।
स्मरण रहोस्, गत वर्ष पुलवामामा भारतीय जवानमाथि भएको हमलामा नवजोत सिंह सिद्धूले पाकिस्तानको बचाउ गर्ने बयान दिएका थिए । यसले निकै विवाद निम्त्याएको थियो तसर्थ उनी कपिल शर्मा शोबाट बाहिरिएका थिए ।
हाल नवजोत सिंह सिद्धूको कुर्सीमा अर्चना पूरना सिंह आसिन छिन् ।